နေအိမ် > ထုတ်ကုန် > ဖန်ထည်ညှပ်
အဓိကအကြောင်းအရာ - 304,316 သံမဏိသံမဏိ
ဖန်သားပြင်ပြတ်တောက်မှု JN-G001 စျေးကွက်တွင်အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်, အရည်အသွေး, အသွင်အပြင်, အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်. ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့်စျေးကွက်တွင်ဂုဏ်သတင်းကောင်းများရှိသည်။ သူတို့ကို။ Glass Clamp JN-G001 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပုံစံ jn-g001 ပုံနှိပ်စာ ဖန်ထည်ညှပ်
အဓိကပစ္စည်း သံမဏိ 304,316 သံမဏိ t 8- 12mm
ပုံစံ jn-g002 ပုံနှိပ်စာ ဖန်ထည်ညှပ်
ပုံစံ jn-g003 ပုံနှိပ်စာ ဖန်ထည်ညှပ်
ပုံစံ jn-g004 ပုံနှိပ်စာ ဖန်ထည်ညှပ်
ဖြေ။ ။ လေဆိပ်, စူပါမားကတ်, တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ, မြေအောက်ရထားဘူတာ,
3. ကုမ္ပဏီတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R ရှိသည်& ဒီအဖွဲ့လား
Foshan Jiannuo ဟာ့ဒ်ဝဲ 2008 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်များနှင့်ပန်းကန်သတ္တုများစသည်တို့ကိုအဓိကအားဖြင့်အထူးပြု inproject များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်0န်ဆောင်မှုပေးခြင်း, နည်းပညာအကြံပေးခြင်းမှ0န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ထား, ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောစိတ်နှင့်ဆန်းသစ်သောအယူအဆဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သောထုတ်ကုန်များသည်ချွေတာသောထုတ်ကုန်များနှင့်အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ဝတ္ထုအသွင်အပြင်များနှင့်အတူပြုလုပ်သည်။ အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာများ, နည်းပညာရှင်နှင့်ဒီဇိုင်နာများပါ0င်သောအဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်ခိုင်မာသောကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာအဖွဲ့များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတိကျသောအရွယ်အစားနှင့်နည်းပညာများကိုအဆင့်မြင့်သောအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေနိုင်သည် ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်ရောင်းအားနှင့်နောက်ဆက်တွဲ0န်ဆောင်မှုစနစ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များထံမှဂုဏ်သတင်းကောင်းနှင့်အတည်ပြုခဲ့ကြပြီ။ Jiannuo Hardware သည် "Customer-customer-community customer-quality first service0န်ဆောင်မှုအယူအဆကိုအမြဲတမ်းအခိုင်အမာဆိုထားသည်။